မကျြမှောကျရေးရာ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home အစီအစဉျမြား မကျြမှောကျရေးရာ
တိုငျးရငျးသားတှေ အခှငျ့အရေးရဖို့ NLD လကျအောကျခံ လုပျကွမလား ?
စဈမှနျတဲ့ ကိုယျစားပွုမှုနဲ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှရေဲ့ အခနျးကဏ်ဍ
အာဇာနညျနေ့၊ လူငယျ ဦးဆောငျခှငျ့၊ ဖယျဒရယျစနဈ လကျတှေ့ ထူထောငျရေးနဲ့ ရုပျထုနိုငျငံရေး
ICJ မှာ တရားစှဲဖို့ ရိုဟငျဂြာအရေးလှုပျရှားသူတှေ ဘယျလို အကောငျအထညျဖျောခဲ့ကွတာလဲ
ရှစ်လေးလုံး ၃၁ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အထူးအစီအစဉ် (တတိယပိုင်း)
https://youtu.be/2ErLAPoYh8s ● ရှစ်လေးလုံး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး လူထုလှုပ်ရှားမှု ၃၁ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ MCN TV NEWS ရုပ်/သံ သတင်းဌာနကနေ အထူးအစီအစဉ် တစ်ရပ်ကို စီစဉ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရှစ်လေးလုံး ၃၁ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အထူးအစီအစဉ် (ဒုတိယပိုင်း)
https://youtu.be/0q0WgclZNfA ● ရှစ်လေးလုံး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး လူထုလှုပ်ရှားမှု ၃၁ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ MCN TV NEWS ရုပ်/သံ သတင်းဌာနကနေ အထူးအစီအစဉ် တစ်ရပ်ကို စီစဉ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။...
ရှစ်လေးလုံး ၃၁ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အထူးအစီအစဉ် (ပထမပိုင်း)
https://youtu.be/IIhXI5SA5Hg ● ရှစ်လေးလုံး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး လူထုလှုပ်ရှားမှု ၃၁ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အထူးအစီအစဉ် (ပထမပိုင်း) မှာတော့ အဲ့ဒီအချိန်က ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ကြတဲ့ ကိုအေးလွင်နဲ့ ကိုသူရိန်တို့...
အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနှင့် သူတို့ သဘောထား
https://youtu.be/h02IADFsn5I ■ မကြာခင် ပြန်လည်ကျင်းပတော့မယ့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပူးပေါင်းကော်မရှင်က လေ့လာတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာကို တင်သွင်းပြီး ပြင်ဆင်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက်ဖို့ ရှိနေတဲ့အပေါ် သဘောထား...
ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေး ဥပဒေကြမ်းအပေါ် နိုင်ငံရေးအမြတ် ထုတ်ခဲ့ကြလား
https://youtu.be/hWV6p8h0ggQ ■ ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ စွတ်စွဲချက်တွေအပါအ၀င် ဒီဥပဒေကြမ်းအပေါ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့ အမျိုးသားရေး အင်အားစုတွေက ဘာကြောင့် စိုးရိမ်နေကြရတာလဲဆိုတာတွေအပေါ် MCN သတင်းဌာနရဲ့ ...
LGBT တွေအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေ ပျောက်ကွယ်ဖို့ ဘယ်လို အမြင်တွေ ပြောင်းဖို့ လိုအပ်နေလဲ
https://youtu.be/_rPZ-zf3zN4 ● မြန်မာနိုင်ငံက (လိင်စိတ်ကွဲ ပြားတိမ်းညွတ်သူ) LGBT တွေ မိမိကိုယ် မိမိ အဆုံးစီရင် သွားရလောက်အောင်အထိ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေ လျှော့နည်းပျောက်ကွယ်ဖို့ အမြင်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းလဲဖို့...
ပြည်ထောင်စုနှင့် အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး အပိုင်း (၃)
https://youtu.be/AsKv_AYlXDY MCN သတင်းဌာနရဲ့ (၇၂) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အထူးအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ “ပြည်ထောင်စုနှင့် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး” ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တတိယပိုင်း အစီအစဉ်မှာတော့ သမ္မတနှင့် ဒုတိယသမ္မတတွေရဲ့ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက် ပုဒ်မ ၅၉ (စ) အပါအ၀င် ခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ပုဒ်မ ၄၃၆ နဲ့ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို...
ပြည်ထောင်စုနှင့် အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး အပိုင်း (၂)
https://youtu.be/oo6uA7eWf-Y MCN သတင်းဌာနရဲ့ (၇၂) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အထူးအစီအစဉ် (ဒုတိယပိုင်း) အစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ အခန်း (၁) နိုင်ငံတော် အခြေခံမူတွေက “နိုင်ငံတော်ရဲ့ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍမှာ တပ်မတော်က ပါဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးကို အစဉ်တစိုက်ဦးတည်သည်” ဆိုတဲ့ အခြေခံမူကို ဘာကြောင့်...
ပြည်ထောင်စုနှင့် အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး အပိုင်း (၁)
https://youtu.be/xtix41e-2RE MCN သတင်းဌာနရဲ့ (၇၂) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အထူးအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ “ပြည်ထောင်စုနှင့် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး” ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမပိုင်း အစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခြေခံမူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာကြောင့် ထည့်သွင်းဖော်ပြလာရတယ်။ ဒီအခြေခံမူတွေကို ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ရေဆွဲစဉ်က တပ်မတော်က ဘယ်လို...
PEN International အဖွဲ့အနေနဲ့ ဘာတွေကို အဓိကထားပြီး ဆောင်ရွက်နေလဲ (ဒုတိယပိုင်း)
လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်တွေ ပိုပြီးတော့ အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာဖို့၊ စာပေဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးတွေ ဖြစ်လာဖို့အတွက် ဦးတည်ပြီး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ PEN International အဖွဲ့အနေနဲ့ ဘာတွေကို အဓိကထားပြီး ဆောင်ရွက်နေသလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အပါအဝင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေကို PEN International ရဲ့ ဒါရိုက်တာနဲ့...